Iindaba - Iityhubhu zeFlorescence eziGcinelwe uMsebenzi weBhariyi yoLwandle yoNyaka
Iityhubhu zeFlorescence eziGcinelwe uMsebenzi weBhariyi yoLwandle yoNyaka
Iityhubhu zeFlorescence zibambe i-barbecue yonyaka yolwandle ngomsebenzi wangoMgqibelo. Sasidlala kunye, sosiwe inyama, sicule size sidanise ngapha nangapha komlilo. Abahlobo abaninzi bamanye amazwe nabo bathatha inxaxheba kwimidlalo nakwizinto esizenzayo. Siyazithanda iimveliso zethu kunye nomsebenzi wethu, sithanda isibhakabhaka esiluhlaza, amafu amhlophe, ulwandle, sithanda oogxa bethu abancedanayo, sithande usapho lwethu olufudumeleyo lwaseFlorescence, sithande ngakumbi izihlobo zethu zangaphandle kunye namaqabane avela kude. Lo ngumsebenzi omkhulu kwaye sijonge phambili ekubeni usijoyine kunyaka olandelayo!
Iityhubhu zeFlorescence zinethemba lokuba nabathengi abaninzi ukuba beze kutyelela isixeko sethu kunye nenkampani, kwaye babe nethuba lokuzimanya nathi sidlale imidlalo, sazi ngakumbi kunye kwaye sonwabe kunye, sinethemba lokugcina ishishini lethuba elide kunye nomnye. Ngeli xesha siza kudala amathuba amaninzi okuya kwisixeko sabathengi kunye nenkampani kunxibelelwano kwaye sazi ngakumbi ukuba bafuna ntoni, ukuphucula nokwandisa imveliso yethu kunye nomgangatho weemveliso kunye nenkonzo. Ukujonga phambili kwikamva elitsha eliqaqambileyo kunye nabathengi kunye.
Qingdao Umgangatho I-ltd Imveliso yethu ikakhulu kubandakanya ityhubhu yerabha yangaphakathi yerabha yezithuthi, iityhubhu zobunjineli kunye ne-rubber flap, njl. uphando kunye nophuhliso, ukwenziwa, ukuthengisa kunye nenkonzo. Iimveliso zethu zisiwe kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela, kuthandwa ngabathengi basekhaya nabangaphandle. Ngapha koko, sidlulile kwi-ISO9001: imvume ye-2008 kwaye sineenkqubo zolawulo lwangoku kunye nezenzululwazi ezibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezinoxanduva. Sijonge phambili ekusekeni ubudlelwane bexesha elide kunye nolwalamano kunye nabathengi bethu.